बालबालिकालाई लोकल कुखुराको अण्डा कि बटाईको अण्डा राम्रो ? – News Nepali Dainik
प्रकाशित मिति: आइतबार, फाल्गुण ०२, २०७७ समय: ९:०१:०६
नेपालमा पाँच प्रजातिका बट्टाई पाइन्छन्। तीमध्ये ‘कमन क्वेल’ बट्टाई पाल्ने सोख र अन्डा वा मासु खाने कार्यमा प्रयोग हुन्छ। आजभोलि यसको अन्डा र मासुको व्यापार बढ्दै छ तर लडाउने सोख लोप भइसक्यो भन्दा हुन्छ। बट्टाईलाई कागुनोको दाना खुवाइन्छ। अन्डामा भिटामिन ए, डी, बी तथा बी १२, लुटिन तथा जिएजेनथिन लगायतका तत्व पाइन्छ।
बालबालिकाको लागि लोकल अण्डा ठिक कि बट्टाइको अण्डा ठिक ?
लोकल कुखुराको अण्डामा भिटामिन ए, भिटामिन ई, भिटामिन डि र ओमेगा थ्रि फ्याटि एसिड बोइलर अण्डामा भन्दा बढि हुन्छ । जुन बालबालिकाको दृष्ट्रि, वृद्धि विकास र रोग प्रतिरोधी प्रणालीको लागी राम्रो हुने बिज्ञहरु बताउँछन् ।
यि दुवै प्रकारको अण्डा प्रोटिन र काब्रोहाइडेट बराबर मात्रामा पाइन्छ । लोकल अण्डामा कोलेस्ट्रोल बोसो कम हुन्छ । जुन बालबालिकाको मुटुको लागी लाभदायक मानिन्छ ।
बटाईको अण्डामा रिबोफ्लेविन, सेलेनियम, कोलनी आदि खनिज बढि हुन्छ । तर सानो आकारले गर्दा प्रोटिन, काब्रोहाइडेट प्रति गोटा कम हुन्छ । ५ वटा बटाईको अण्डा र एक वटा कुखुराको अण्डा आकारमा बराबर हुन्छ ।
प्रति सय ग्राम अण्डामा हिसाब गर्दा बटाइको अण्डामा कुखुराको अण्डामा भन्दा प्रोटिन, फ्याट, भिटामिन बि २, आइरन, भिटामिन बि १२ बढि हुन्छ । तर बटाईको अण्डाको औसत तौल १० ग्राम हुन्छ भने कुखुराको अण्डाको औसत तौल ५० ग्राम हुन्छ ।
Last Updated on: February 14th, 2021 at 9:01 am